Vonona i Hong Kong handrava alohan’ny Fetim-pirenen’i Shina ny vavolombelona Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Mpitarika ny HK Alliance telo voampanga ho mandrisika fisaraham-bazana
Voadika ny 18 Septambra 2021 5:02 GMT
Ankavia miankavanana: Lee Check-yan, Albert Ho sy Chow Hang-tung, mpitarika ny Hong Kong Alliance. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alalana.
Rehefa nanagadra ireo mpikambana fototra ao amin'ireo vondrona mpikatroka, ny Fikambanamben'i Hong Kong Manohana ny Hetsika Demaokratika Tia Tanindrazana ao Shina (HK Alliance), napetraka ny polisim-pirenena misahana ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong mba handrava ny fikambanana izay mikarakara ny fiaren-tory isa-taona ho fahatsiarovana ny fandripahana tany Tiananmen tamin'ny taona 1989.
Namoaka taratasy avy amin'i Chris Tang, lehiben'ny Biraon'ny Fiarovana ao Hong Kong tao amin'ny Twitter i Su Xinqi, mpanao gazety avy ao amin'ny masoivohom-baovao AFP ao Hong Kong, milaza fa hanala ny HK Alliance ao amin'ny Rejisitry ny orinasa ny Lehibe Mpanatanteraka Carrie Lam:
#JUSTIN Tsy misy fiatoana ny fandravana ny HK Alliance – vonona ny hanome toromarika ho an'ny lehibe mpanatanteraka Carrie Lam sy ExCo ny minisitry ny filaminana Chris Tang, araka ny torohevitry ny lehiben'ny polisy, Raymond Siu mba hamafa ny HKA ao amin'ny Rejisitry ny Orinasa . Manana hatramin'ny 5 hariva amin'ny 24 Sep ny HKA mba hifandahatra kanefa any am-ponja avokoa ireo mpitarika rehetra
Herinandro monja alohan'ny 1 Oktobra, fetim-pirenena Shinoa ny fe-potoana farany fanesorana, amin'ny 24 septambra. Toy izany koa, voatery nakatona tamin'ny 24 Jolay, herinandro talohan'ny 1 Jolay, daty iray manamarika ny fananganana ny Antoko Komonista Shinoa (CCP=AKS) sy ny daty nanolorana an'i Hong Kong any Shina ny gazety Apple Daily, taorian'ny nisamborana ny mpitantana azy ary voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny vahiny.
Nilatsaka ny fanapaha-kevitra handrava ny Fikambanambe HK taorian'ny naneren'ny polisy ny fiampangana ireo mpitarika telo voalohany ao aminy, Lee Cheuk-yan, Albert Ho ary Chow Hang-tung, miampanga azy ireo ho nitarika fanakorontanana araka ny Lalàna mifehy ny Filaminam-pirenena (NSL). Voampanga ho nitarika ny hafa handray anjara amin'ny hetsika tsy ara-dalàna hanohintohina ny fahefam-panjakana nanomboka ny 1 Jolay 2020 ka hatramin'ny 8 septambra 2021 izy telo ireo. Nanambara antsipiriany bebe kokoa tao amin'ny Twitter ny mpanao gazety Alvin Lum avy ao amin'ny CitizenNews monina ao Hong Kong :
Vaovao tsy hita any an-kafa: nohelohin'ny fitsarana ny tanjona fanohintohinan'ny Hong Kong Alliance “hamarana ny didy jadon'antoko tokana”, raha soritsoritan'ny mpamelona labozia fahatsiarovana ho “fitondrana tsy refesi-mandidy” ahitana “mpitondra mpampahory” tokony haongana ny Antoko Komonista Shinoa.
Mety hitarika sazy 10 taona an-tranomaizina farafahabetsany ireo fiampangana ireo. Efa manefa sazy hafa noho ny fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehana nahazo alàlana tamin'ny taona 2019 i Albert Ho sy Lee Cheuck-yan .
Tao amin'io fitsarana io ihany, mpikambana dimy ao amin'ny Alliance: Simon Leung Kam-wai, Tang Ngok-kwan, Chan To-wai, Tsui Hon-kwong sy Chow Hang-tung no voampanga ho nandika ny fitsipi-panatanterahana ny NSL noho izy ireo nandà hanaraka ny fangatahan'ny polisy. Mety hitarika onitra 100 000 $ HK (eo ho eo amin'ny 13000 dolara Amerikana eo ho eo) sy enim-bolana am-ponja ny fiampangana tsy fanarahan-dalàna.
Miatrika fiampangana hafa ihany koa ireo mpikambana fototra ao amin'ny HK Alliance, miaraka amin'ireo mpikatroka avy amin'ny vondrona sivika hafa noho ny fikarakarana, fandrisihana, na fandraisana anjara tamin'ny fiaretan-tory mandrehitra labozia fahatsiarovana Tiananmen voaràra tamin'ny 4 Jona 2020. Niaiky ny helony fa nandray anjara tamin'ny fiaretan-tory tamin'ny herintaona i Albert Ho sy ireo mpikatroka 11 tamin'ny 9 septambra. Ny sasany, toa an'i Chow Hang-tung sy Lee Cheuk-yan kosa nilaza fa tsy meloka ary hiatrika fitsarana amin'ny volana novambra.
Nikarakara fivoriana goavambe tamin'ny 4 Jona tany Hong Kong ny HK Alliance nanomboka ny taona 1990 mba hahatsiarovana ny famoretana tao Tiananmen tamin'ny fihetsiketsehana mpomba ny fanavaozana demaokratika sy manohitra ny kolikoly nataon'ny mpianatra tamin'ny taona 1989. Nandritra ny 30 taona, an'aliny no nanatrika ny hetsika fanao isan-taona, saingy sambany noràran'ny polisy ny fivorian'ny besinimaro tamin'ny taona 2020 noho ny ahiahy ara-pahasalamana.
Araka ny nosoritan'ny filohan'ny vondrona teo aloha, Albert Ho tamin'ny fangatahany fanalefahana sazy hoe nandray izany ho toy ny andraikitra fitiavan-tanindrazana ny HK Alliance mba hahatsiaro ny tantara sy hilazana ny fanirian'ny vahoaka hanana rafitra politika malalaka sy demaokratika any Shina:
.. notarihin'ny feon'ny fieritreretanay sy ny fanoloran-tenanay ara-pitondrantena izahay mba hanao izay tsara indrindra vitanay hitazonana ity fomba amam-panao ara-tantara fahatsiarovana ny 4 Jona ity, sy hahatsiaro ny lesona amin'ny tantara ary hiteny ny marina amin'ny fahefana.
Niampanga ny HK Alliance ho ‘kasinga vahiny’ ny polisy ary nangataka ny fanampiany tamin'ny fanomezana ny lisitry ny antontan-taratasy anatiny hamotopotorana azy. Nandà izany ny vondrona tamin'ny 8 septambra. Tao anatin'ny 24 ora, nosamborin'ny polisy ireo mpikambana dimy ao amin'ny komity mpanatanteraka, nidirana an-keriny ny trano fitehirizan'entan'ny fikambanana sy ny tranombakoka manan-tantara momba ny Fandripahana tao Tiananmen 1989, ary nogiazana ny 2,2 tapitrisa dolara HK (283.000dolara amerikana) tamin'ny fananany .
Tom Grundy avy ao amin'ny Hong Kong Free Press nisioka momba ny famoretana nataon'ny polisy:
Fampirantiana mana-tantara nentin'ny polisin'ny filaminana. Sary: Isaac Lawrence / AFP.
Nandritra izany fotoana izany, voasambotra ny talen'ny Alliance, Tsui Hong-kwong:
Ary ny kabary feno nataon'i Albert Ho tany am-pitsarana androany maraina
Efa nanampo ny fisamborana azy talohan'ny nanolorany ny taratasy tsy fankatoavan'ny HK Alliance ny mpisolovava Chow Hang-tung, 36 taona zandriny indrindra tamin'izy telo lahy, araka ny nasongadin'ilay mpanao gazety Xinqi Su:
Nanontaniana omaly hoe inona no tiany hambara amin'ny vahoakan'i HK raha misy ny fisamborana, nilaza i Chow Hang-tung hoe “Te hiteny amin'ny vahoaka HK aho hoe: aza miala amin'ny tolona ataonareo, aza maika loatra… aza mibaboka amin'ny fahefana tsy mitombina , aza mibaboka amin'ny fiainana izay mangataka aminao handainga isan'andro…
Rehefa nanaiky izy fa hiampanga azy amin'ny ‘fitarihana fakorontanana’ ny polisy fa tsy “mpiasa vahiny”, nilaza ity mpisolovava momba ny zon'olombelona ity fa “nisento” izy, satria nanantena izy fa mety hiteraka sehatra ho an'ny adihevitra misokatra momba ny andraikitra tamin'ny fandripahana 4 Jona sy ny rafitra politika ao Shina ny fitsarana:
Hafatra iray avy amin'i Chow Hang-tung @zouxintong tamin'ny alàlan'ny mpisolovava azy, rehefa avy nanova ny fiampangana an'i Chow ny HKPF: “Rehefa nandre ireo teny hoe” fitarihana fanakorontanana “aho dia niato kely ary nahatsiaro maivamaivana. Tahaka ny toy izany no nandaminana ny karatra, andeha hanao adihevitra malalaka sy marina isika.
Araka ny nasehon'ny sanganasa farany an'ilay mpanao sariitatra ara-politika Ah To, mitovy amin'ny fanafoanana ny hetahetam-bahoaka ho amin'ny demaokrasia sy ny fanoloana azy amin'ny nasionalisma ny famoretana ny HK Alliance.
Nomen'ny Doodle lohateny hoe “Fandidiana”, misaona ny HK Alliance ho Fanohanana ny Hetsika Demaokratika Tia tanindrazana any Shina, natsangana tamin'ny taona 1989.
Niorina tsara izy nandritra ny 30 taona, saingy ankehitriny nosoloina saina nasionalisma miloko mena ny fanilo fahazavan'ny andriamanibavin'ny Demaokrasia .😩
Sary: TG/ IG ah_to_hk